Raha olona efa lanaky ny adim-piainana ary ve no hijery ny fatin’Andriamanitra mihatona dia hahazo aina sy ho velom-panantenana? Sa sanatria vao mainka ho kivy satria folaka andry niankinana? Izay no misterin’ny Lakroà: Andriamanitra voasandratra, ka ny nanandratana Azy, hoy Md Joany no lalana hiverenany any amin’ny voninahitry ny Ray, ka hanehoany amintsika ny maha-Ilay Misy (YHWH) Azy, araka ny anarana nomeny mba hahalalan’i Moizy Azy.
Tsy Andriamanitry ny “fahagagana” ny Andriamanitsika fa Andriamanitra “mitoetra” (Emanoela) eo anivontsika ka miaraka amintsika eo anivon’ny fijaliana. “Bibilava mahamay” (שָׂרָף saraph) mitovy amin’izay nanaikitra ny vahoaka no nasain’Andriamanitra nataon’i Moizy. Fitovizana amin’ny fahorian’ny vahoaka no endrika tiany hisehoana, fa moramora kokoa ho antsika ny hanompo andriamanitra varahina, afaka maneho hery sy tanjaka. Izay nitodika tany amin’ilay bibilava mitovy amin’ny halemen’ny vahoaka anefa dia sitrana, hoy ny Boky Fahendrena, tsy noho ny zavatra hitan’ny masony anefa, fa noho Andriamanitra, Mpamonjy ny olona rehetra (Fah 16, 7).
Mampahatsiaro ny bibilava “nanaikitra” ka nahatonga an’i Adama sy Eva hikomy amin’Andriamanitra izany rehetra izany (Jen 3, 1-5). Naniry ny hitovy amin’Andriamanitra izy ireo satria noheveriny ho fahabangana ny maha-olombelona naharian’Andriamanitra azy ireo. Andriamanitra kosa, nanaiky ny ho toga olombelona mba hanehoany amintsika ny hakanton’ny maha-zanany, nohariany hitovy endrika aminy antsika. Ary ny faneken’i Kristy hatramin’ny fahafatesana mahafa-baraka kosa no lalana itondrany antsika amin’ny fahasambaran’ny lanitra, hiombona tanteraka amin’ny voninahitra nahariany antsika talohan’izao tontolo izao, hoy Md Paoly (Efezy 1, 4).
Izay tsy mino fa “Izy mihantona eo amin’ny hazo” no voninahitr’Andriamanitra dia ho faty ao amin’ny fahotany. Tsy finoana mijanona amin’ny fikarohana Azy fotsiny anefa izany. Mampandinika ny tenin’i Jesoa hoe : “handeha aho ka hitady ahy ianareo, ary ho faty amin’ny fahotanareo ianareo”. Tsy fitadiavana Azy mba hovonoina indray sanatria ny fankalazantsika ny Paka fa fitadiavana Azy kosa mba hahalala Azy bebe kokoa ka hanahafantsika Azy amin’ny fiainana marina tokoa.